အလုပ်ရှာမည် | USAHello ကနေအလုပ်အကိုင်နှင့်အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းအရင်းအမြစ်များကို | USAHello
သင်သည်သင်၏အလုပ်ရှာဖွေရေးစတင်ခင်မှာ, သင်သည်သင်၏အတိတ်အလုပ်အတွေ့အကြုံနှင့်ပညာရေးနှင့်ပတ်သက်သည့်သတင်းအချက်အလက်များကိုစုဆောင်းရန်လိုအပ်ပါတယ်. ဖြစ်ရပ်များကိုတကျရောကျနှင့်သင့်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ကွန်ယက်ကိုကယျြဝနျးမှစေတနာ့ဝန်ထမ်းအပေါ် Plan ကို။ ဆက်ဖတ်ရန်
အများစုကအလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းများကိုအွန်လိုင်းတွေ့ရှိသော်လည်းသင်လည်းသင်သိကလူမှတဆင့်ရှာဖွေနိုင်ပါတယ်, အလုပ်အကိုင်အရုံးများမှာ, နှင့်စီးပွားရေးနေရာများ။ ဆက်ဖတ်ရန်
တစ်ဦးကကိုယ်ရေးရာဇဝင်သင့်ရဲ့ကျွမ်းကျင်မှုနှင့်အောင်မြင်မှုများစာရင်းစက္ကူသည်နှင့်တစ်ဦးအလုပ်ရှင်ထံမှအာရုံစူးစိုက်မှုရရန်အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းဖြစ်ပါသည်. သင့်ရဲ့ကိုယ်ရေးရာဇဝင်ကိုရေးသားဖို့ဘယ်လိုပေါ်အကြံပေးချက်များကိုရှာပါ, အဘယ်အရာကိုသတင်းအချက်အလက်ထည့်သွင်းရန်, နှင့်ကိုယ်ရေးမှတ်တမ်းများကဲ့သို့ကြည့်ရှုသင့်ပါတယ်သင်သည်အဘယ်သို့ပြသတဲ့ template ကို။ ဆက်ဖတ်ရန်
တစ်ဦးကအဖုံးစာတစ်စောင်သင်သည်သင်၏ကျွမ်းကျင်မှုနှင့်အသေးစိတ်အတွေ့အကြုံကိုအကြောင်းကိုပုံပြင်များပြောပြနိုင်တဲ့စာမျက်နှာ-ရှည်လျားစာရွက်စာတမ်းဖြစ်ပါသည်. အဖုံးအက္ခရာများသင်ကတခြား applications များထက်ကွဲပြားခြားနားသောဖြစ်ကြသည်ကိုဘယ်လိုရှင်းပြဖို့သင်လျှောက်ထားတဲ့ကုမ္ပဏီမှာအလုပ်လုပ်ချင်ဘာကြောင့်ရှင်းပြဖို့အခွင့်အလမ်းပေးပါ။ ဆက်ဖတ်ရန်
Professional ကညွှန်းဆိုသငျနှငျ့အတူကလူအလုပ်လုပ်ခဲ့သို့မဟုတ်စေတနာ့ဝန်ထမ်းပြီ. အလုပ်ရှင်များကိုသင်ကဲ့သို့ဖြစ်ကြ၏ဘယ်သို့သောအကြောင်းသင်ယူရန်ဤလူကိုခေါ်ပါလိမ့်မယ်. သင်တစ်ဦးအလုပ်ရှာဖွေရေးစတင်ခင်မှာ, သငျသညျညှနျးနဲ့သူတို့ရဲ့ဆက်သွယ်ရန်အချက်အလက်များ၏စာရင်းကိုအတူတကွထားရန်လိုအပ်ပါတယ် ဆက်ဖတ်ရန်
ယောဘသည်တွင်ကျယ်စွာသင်ကိုယ်တိုင်အကြောင်းသတင်းအချက်အလက်တင်သွင်းခြင်းအားဖြင့်ရာထူးများအတွက်လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်ရှိရာအွန်လိုင်းဝဘ်စာမျက်နှာများ, သင့်ရဲ့ကိုယ်ရေးရာဇဝင်, တခါတရံတခုအဖုံးစာတစ်စောင်. သင်သည်သင်၏သတင်းအချက်အလက်များကိုတင်သွင်းခဲ့ကြပြီးတာနဲ့, သင်ကတည်းဖြတ်မရနိုင်ပါ, ဒါကြောင့်သင်ဂရုတစိုက်ပြုလုပ်ပြင်ဆင်တည်းဖြတ်အရေးကြီးသည်က ဆက်ဖတ်ရန်
အလုပ်အကိုင်အခွင့်အများအတွက်စက္ကူ applications များဖြည့်စွက်
စီးပွားရေးလုပ်ငန်းအချို့နေရာများ, အများဆုံးစားသောက်ဆိုင်နဲ့တူ, နေဆဲ Entry-level ကိုအလုပ်အကိုင်အခွင့်အများအတွက်စက္ကူ applications များကိုသုံးပါ. အမှားလုပ်မပါဘဲကျွန်တော်တို့ရဲ့စက္ကူ applications များဖြည့်ဖို့ဘယ်လိုလေ့လာသင်ယူ ဆက်ဖတ်ရန်
အလုပ်ရှင်များကိုစဉ်းစားတဲ့အခါမှာသူတို့သည်သင့်ကိုငှားရမ်းဖို့လိုပေမည်, သူတို့ဖုန်းကိုသင်ဖိတ်ခေါ်, ကို virtual, သို့မဟုတ်ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးအင်တာဗျူးအတွက်. အဘယ်အရာကိုဝတ်ဆင်ရန်လေ့လာပါ, ဘယ်လိုပြုမူရန်, နှင့်အဘယ်သို့ဆိုင်အင်တာဗျူးပြီးနောက်လုပ်ဖို့ ဆက်ဖတ်ရန်
သူတို့တစ်တွေအလုပ်ကမ်းလှမ်းချက်ကိုရသည့်အခါအများစုကအမေရိကန်တွေဟာသူတို့ရဲ့လစာညှိနှိုင်း. အဘယ်သို့ဆိုဖို့နဲ့အခါသင်ပေးဆောင်နေကြဘယ်လောက်တိုးမြှင့်ဖို့ကပြော Learn ဆက်ဖတ်ရန်
Networking ဖြစ်ရပ်များအသက်မွေးဝမ်းကျောင်းအကြံဉာဏ်ကိုမျှဝေအလုပ်အကိုင်များနှင့်လူများအဘို့အရှာနေကြသူလူများအတွက်လူမှုရေးဖြစ်ရပ်များများမှာ. သငျသညျဆိုသညျကားအဘယ်သို့ကျင့်သုံးလျှင်သင်လျော့နည်းအာရုံကြောခံစားရပါလိမ့်မယ်, အဘယ်အရာကိုသင်နှင့်အတူယူဆောင်လာရန်, နှင့်သင်မည်သို့ go မတိုင်မီကလူစကားပြောဖြစ်ပါတယ်။ ဆက်ဖတ်ရန်
သင်ယူခြင်းနှင့်အလုပ်အကိုင်အင်တာဗျူးမေးခွန်းများကောင်းသောအဖြေကိုကျင့်သုံးသင့်အင်တာဗျူးတွင်မှာကောင်းသောအမှုကိုပြုကူညီပေးပါမည်. အများဆုံးဟုမေးမေးခွန်းများကို Read. ဆက်ဖတ်ရန်
စေတနာ့ဝန်ထမ်းများနှင့်အလုပ်သင်အလုပ်အကိုင်များကိုသင်အလုပ်ခွင်အတွေ့အကြုံရကူညီပေးသည်ကြောင်းမရတဲ့အလုပ်ဖြစ်ကြသည်. သူတို့သည်သင့်အလုပ်တစ်ခုရဖို့ဘယ်လိုကူညီပေးနိုင်သလဲဆိုတာကိုလေ့လာပါ. ဆက်ဖတ်ရန်
ပိုကောင်းတဲ့သင့်ရဲ့အလုပ်ရှာဖွေရေးစီမံခန့်ခွဲရန်လေးအသုံးဝင်သော tool များကို ကိုကြည့်ဖို့အဘယ်အရာကိုဝက်ဘ်ဆိုက်များကိုသိရှိသငျသညျအလုပျတကွန်ယက်နှင့်တွေ့ပါကကူညီနိုင်ပါတယ်. သင့်ရဲ့အလုပ်ရှာဖွေရေးစီမံခန့်ခွဲရန်လေးအသုံးဝင်သောအွန်လိုင်း tools တွေကိုလေ့လာပါ
6 အမေရိကရှိဒုက္ခသည်တစ်ဦးသို့မဟုတ်လူဝင်မှုအဖြစ်သင့်ပြီးပြည့်စုံသောအလုပ်ကိုရှာဖွေခြေလှမ်းများအားလုံးအသစ်ရောက်ရှိလာသောအဘို့သင့်ပြီးပြည့်စုံသောအလုပ်ကိုရှာဖွေခြောက်လလက်တွေ့ကျတဲ့အကြံပေးချက်များ. သင့်ရဲ့အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းရှာဖွေရေးထဲကအများဆုံး Making: သင်ဘယ်လိုအမေရိကတိုက်၌သင်တို့၏စုံလင်သောအလုပ်ရှာရမလဲ? USAHello